Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, January 09, 2011 Sunday, January 09, 2011 Labels: ဆောင်းပါး
ချမ်းသာသူတိုင်းဟာလည်း အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ကြသူတွေ မဖြစ်နိုင်ကြပါဘူး။ ငွေကြေးတွေအများကြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာနေကြလို့ သူတို့တွေကတော့ ပျော်ရွှင်နေကြမှာဘဲ စိတ်ဆင်းရဲစရာ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရင် တကယ်ကိုမှားပါတယ်.. သူတို့တွေရဲ့ဘ၀မှာလည်း စိတ်ဆင်းရဲစရာ မပျော်ရွှင်စရာ အကြောင်းတွေဟာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်.. အချို့သော သူတွေမှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ လစာတွေ အများကြီး ရနေကြပါရက်နဲ့ မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေကြတာ၊ စိတ်ဆင်းရဲနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်.. ပိုက်ဆံလည်း အများကြီးရှိနေတယ်... အလုပ်အကိုင် ကောင်းကောင်းလည်းရှိတယ်.. ဒီလိုလူကိုမှသာ ချမ်းသာတယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါသလား..
တကယ်တမ်းတော့ ချမ်းသာတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းနဲ့ တိုင်းတာဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ မိမိရဲ့ လက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှုရမယ် တင်းတိမ် ရောင့်ရဲတတ်မယ် ဆိုရင်လည်း ငွေကြေးအများကြီး မရှိရင်တောင် စိတ်ကျေနပ်မှု ရတဲ့အတွက် ချမ်းသာမှု တစ်မျိုးကို ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ချမ်းသာခြင်းကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင် စိတ်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု ရနေရင် ချမ်းသာနေတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ငွေကြေးတွေ အများကြီး ရှိနေပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိဘူး၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ် ဆိုရင်ဖြင့် အဲဒီလူဟာ အမှန်တကယ် ချမ်းသာနေတဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး… အဓိကက စိတ်ချမ်းသာမှု ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ချမ်းသာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီလိုဆိုရင် လောကကြီးမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့တော့ ချမ်းသာသူတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်.. ဘယ်လိုနည်းနဲ့များ ချမ်းသာတဲ့သူ ဖြစ်နိုင်မလဲ.. စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်…
ချမ်းသာတယ်လို့ပြောနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၇)ရပ်ရှိပါတယ်.. အဲဒါတွေက
(၁) မိမိရဲ့ အတွင်းစိတ်မှ ချမ်းသာမှု ရရှိခြင်း
လောကကြီးမှာ အရာရာကို ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေ ကြည့်မြင်တတ်သူတွေဟာ အလွယ်တကူ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်.. တစ်ချို့သောသူတွေဟာ အခက်အခဲတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရရင်တောင် အကောင်းဘက်ကနေ သော်လည်းကောင်း၊ ရယ်စရာအနေနဲ့သော်လည်း ကြည့်မြင် တတ်ကြပါတယ်.. သူတို့တွေဟာ သောကဖြစ်စရာ၊ စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေကို မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ကြာရှည် သိမ်းဆည်းထား တတ်သူတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် စိတ်အေးချမ်းမှုကို အမြဲတမ်း ခံစားနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဘ၀မှာ ဘယ်လောက်ပင် ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာပင်ဖြစ်ပါစေ.. အချိန်တန်ရင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ကျော်လွှား အောင်မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. မဖြေရှင်းနိုင်ခင် တဒင်္ဂ အခြေအနေလေးသာ စိတ်သောက ရောက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီး မကြာခင်မှာ အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့တွေးတောကာ အကောင်းမြင်တတ်သူ တော်တော် များများဟာ မိမိရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ အေးချမ်းနေတဲ့အတွက် ချမ်းသာသူတွေလို့ ခေါ်ဆိုလုိ့ရပါတယ်..
(၂) ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်မှုကြောင့် ချမ်းသာခြင်း
ကျန်းမာခြင်းဟာ လာဘ်တစ်ပါးလို့ ဆိုကြသလိုပါဘဲ.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ငွေနဲ့ချိန်စက်ပြီး ၀ယ်ယူလို့ မရနိုင်ပါဘူး.. ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပင် ကြွယ်ဝချမ်းသာစေကာမူ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေသူများဟာ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို မရတဲ့အတွက် သူတို့မှာ အပြည့်အ၀ ချမ်းသာနေတယ်လို့ ခေါ်လို့မရပါဘူး.. ဒါကြောင့် သင့်မှာ နာတာရှည်ရောဂါမရှိဘူး၊ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ချမ်းသာသူ တစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
(၃) မိသားစု မိတ်သင်္ဂဟ ပေါများ ချမ်းသာခြင်း
သင့်မှာ သင့်ကို ချစ်ခင်စွာ ဂရုစိုက်ပူပန်သူ၊ သတိတရ ရှိနေကြသူ မိဘမောင်ဖွား၊ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ချစ်သူခင်သူတွေ ရှိနေခြင်းဟာလည်း အလွန်မှ ကံကောင်းခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်.. ပိုက်ဆံချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော်လည်း မေတ္တာ စေတနာနဲ့ ဂရုတစိုက် ပူပန် စောင့်ရှောက်သူ မရှိခဲ့ရင် အဲဒီလူရဲ့ ဘ၀ဟာ အထီးကျန် ဆန်လှပြီး စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ချိန်၊ သင် လိုအပ်ချိန် တွေမှာ သင့်ဘေးနားမှာ အချိန်မရွေး ဂရုတစိုက် ပြုစုပေးနိုင်မဲ့သူ၊ အားပေးမဲ့သူတွေ ရှိနေပြီဆိုရင် သင်ဟာ တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့် ချမ်းသာသူတစ်ဦး ဖြစ်နေပါသေးတယ်..
(၄) အလုပ်အကိုင်ကောင်းကြောင့် ချမ်းသာခြင်း
သင်ဟာ သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ နေရာကောင်း တစ်နေရာ ရထားတယ်.. ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ အနေအထားကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရတယ်။ မိမိ လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာတဲ့ အနေအထား ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း မိမိအလုပ်ကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်တဲ့ ခံစားချက် လေးတော့ ခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီလို အလုပ်မှာ ပျော်ပိုက်နေတာ၊ အဆင်ပြေ နေတာဟာလည်း စိတ်ကို ချမ်းသာမှု ပေးနိုင် တာကြောင့် သင်ဟာ ဒီနည်းအားဖြင့်လည်း ချမ်းသာသူတစ်ဦးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်..
(၅) စီးပွားရေး ပြည့်စုံအဆင်ပြေမှုကြောင့် ချမ်းသာခြင်း
ဒီအချက်ကတော့ ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုကိုခေါ်တဲ့ ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. စီးပွားရေး အဆင်ပြေနေရင် ငွေကြေးလည်း အဆင်ပြေနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. လောကကြီးမှာ အရာရာကို ငွေနဲ့ ဆုံးဖြတ် တိုင်းတာလို့ မရဘူးဆိုပေမဲ့ ကိစ္စ တော်တော်များများကို ငွေက ပြီးပြည့်စုံ နိုင်စေတာကြောင့် လူတွေအတွက် ငွေကြေး ဟာလည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်.. ငွေကြေးများများစားစား လက်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့ရင် ကိုယ်သွားချင်တာ၊ စားချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ငွေဟာ ပျော်ရွှင်မှု တော်တော်များများကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်.. မိမိစိတ်တိုင်းကျ လှူဒါန်းနိုင်ခြင်း ပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်ခြင်းဟာ လူတွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ၊ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစရာ တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သင့်လက်ထဲမှာ ငွေကြေးများများစားစား ရှိခဲ့ရင် စိတ်တိုင်းကျ လှူနိုင်၊ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲနိုင်တယ်.. ဒီလို ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အချို့သောအရာတွေ လုပ်နိုင်ခြင်း၊ လှူနိုင်တန်းနိုင်၊ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ငွေရှိတာဟာလည်း ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်..
(၆) ခရီးထွက်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာမှု ရရှိခြင်း
ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသ အသစ် အဆန်းတွေကို ခရီးသွားရတဲ့အခါမျိုးတွေ၊ ကိုယ်ပြင်းပြင်းပြပြ သွားချင်တဲ့နေရာတွေကို ရောက်ရတဲ့အခါ၊ မတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ လူသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံသိကျွမ်းရတာ ၊ မသိသေးတဲ့ဒေသန္တရ ဗဟုသုတတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတာဟာ စိတ်ကို ပျော်ရွှင် ကြည်နူးစေတယ်.. လန်းဆန်း တက်ကြွတဲ့ စိတ်ခံစားမှု အသစ်တွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှား စရာတွေကို ရရှိစေပါတယ်.. အဲဒီလို နေရာဒေသ အသစ်တွေကို မကြာခဏ ရောက်ရခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ခရီးများကို မကြခဏ သွားရခြင်းတို့ကြောင့် ရရှိတဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့မှုဟာလည်း တန်ဖိုး ကြီးမားတဲ့အတွက် ခရီးမကြာခဏ သွားနိုင်ခြင်းဟာလည်း ချမ်းသာမှုတစ်မျိုးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်..
(၇) အများအကျိုး၊ ပရဟိတအကျိုး ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ချမ်းသာခြင်း
အကူအညီလိုအပ်သူများ၊ မိမိထက် ဆင်းရဲချို့တဲ့သူများ၊ ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူများကို ကူညီခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း စတဲ့ မွန်မြတ်သော ပရဟိတ အလုပ်တွေ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ပြီး လူအများကို စိတ်ကောင်း စေတနာဖြင့် ကူညီခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မြင့်မားလာစေနိုင်သလို ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများက လေးစားအားကျရသူ ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်.. ထိုသူများဟာ ငွေကြေးအားဖြင့် မချမ်းသာစေကာမူ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ချီးကျူး လေးစားထိုက်သူ ဖြစ်နေပါတယ်.. ထိုကဲ့သို့ လူအများက လေးစား အားကျခံရခြင်းဟာလည်း ဘ၀မှာ ချမ်းသာခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
အထက်က ဖော်ပြပါ နည်းလမ်း(၇)ရပ်ထဲမှာမှ တစ်ချက်ချက်ထဲက အကြောင်းအရာဟာ သင့်ရဲ့လက်ရှိ အနေအထားနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ချမ်းသာတဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်နေပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဘ၀ရဲ့ ချမ်းသာနိုင်တဲ့ အချက်တွေထဲကမှ မိမိနဲ့ ဘယ်အချက်များ ကိုက်ညီမလဲ၊ မခက်ခဲလှတဲ့ ချမ်းသာခြင်းကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ရရှိအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကို ချင့်ချိန်စဉ်းစားရင်း ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်များ ချမ်းသာနေပြီလဲဆိုတာ ရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့လားနော်။
Ref: Are We Really Wealthy? ( Funzug.com)
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, January 07, 2011 Friday, January 07, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
အချို့သောသူတွေဟာ အများနဲ့မတူ ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရလေးတွေ ဖြစ်အောင် တစ်သက်မှာတစ်ခါ ဆန်းပြားတဲ့နေရာလေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး အလည် သွားရောက်တတ်ကြပါတယ်.. ဇနီးမောင်နှံတွေ၊ မင်္ဂလာဦး မောင်နှံတွေဆိုရင်လည်း ဟန်းနီးမွန်းတို့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်တို့ကို ဘ၀အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ ဘယ်ခါပြန်တွေးတွေး သတိရစေနိုင်မဲ့ နေရာမျိုးတွေကို ရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. အဲဒီလို သွားချင်သူများ အတွက် ရေခဲတွေနဲ့ချည်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဟိုတယ်လို နေရာမျိုးကလည်း တစ်သက်တာ အမှတ်ရစရာဖြစ်မဲ့ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ကမ္ဘာပေါ်က ရေတွေခဲအောင် အေးလွန်းတဲ့ နိုင်ငံတစ်ချို့တွေမှာ ခုလို ရေခဲတွေ၊ နှင်းခဲတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတတ်တဲ့ ဟိုတယ်တွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်.. အဲဒီထဲကမှ ဆွီဒင်နိုင်ငံက ရေခဲဟိုတယ်ကတော့ Jukkasjärvi က Torne မြစ်အနီးမှာ မှာတည်ရှိပြီး နှင်းတွေစခဲတဲ့ အောက်တိုဘာမှာ ရေခဲတန်ချိန်ပေါင်း တစ်သောင်း၊ နှင်းတန်ချိန်ပေါင်း ၃၀၀၀၀ နဲ့ စတင် တည်ဆောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပေ ၃၀၀၀၀ ပတ်လည် အကျယ်ရှိ ရေခဲဟိုတယ်ဟာ အာတိတ်စက်ဝိုင်းရဲ့ မြောက်ဘက် ၂၀၀ ကီလိုမီတာမှာ တည်ရှိပါတယ်..
အခြားနေရာဒေသတွေကို ရောက်ခဲ့ဖူးတာနဲ့ မတူတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေခဲဟိုတယ်ဟာ နှင်းတွေ၊ ရေခဲတွေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သူများအတွက် အထူးရည်ရွယ် ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ရေခဲဟော်တယ်ထဲမှာ ရေခဲတန်ချိန် ၄၀၀၀ နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဘားကောင်တာ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အသေး၊ မိသားစုအခန်း၊ ၂ယောက်ခန်း၊ စသည်တို့ ပါရှိပါတယ်.. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ၀တ်ပြု ဆုတောင်းနိုင်ရုံသာမက မင်္ဂလာအခမ်းအနားများလည်း ကျင်းပနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. ရေခဲဘား ကောင်တာမှာတော့ ရေခဲတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခွက်တွေနဲ့ အဖျော်ယမကာတို့ကို သောက်သုံးနိုင်ပြီး စားသောက်ခန်းမှာလည်း ရေခဲကို ထွင်းထုထားတဲ့ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များနဲ့ အစားအသောက်များကို စားသောက်နိုင်ပါတယ်.. အိပ်ဖို့ ကုတင်၊ ထိုင်ခုံ၊ စားသောက်စားပွဲ၊ အစစအရာရာ အားလုံးကို ရေခဲများနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ကြည်လင်နေတဲ့ ရေခဲနဲ့ နှင်းခဲတွေရဲ့ အရောင်နဲ့ အအေးဓာတ်ဟာ ရောက်လာသူတို့ရဲ့စိတ်ကို ထူးထူးခြားခြား ခံစားချက်တစ်မျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
ရေခဲဟိုတယ်ရဲ့ တစ်ညသာ တည်းခိုခ နှုန်းထားမှာ ဒေါ်လာ ၃၀၀ အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာကနေ ဧပြီလအထိ ဟိုတယ်ကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်. ရေခဲဟိုတယ်အတွင်းရှိ အအေးဓာတ်မှာ -5 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ -8 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ထိ ရှိနေပြီး အေးလွန်းတယ် ထင်ရပေမဲ့ ပြင်ပမှာတော့ -37 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိ ရှိနေတတ်တာကြောင့် ပြင်ပ အအေးဓာတ်ထက်စာရင် မဆိုးလှဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်.. ဧည့်သည်များဟာ လေအိတ် မွေ့ရာကြီးတွေပေါ်မှာမှ အအေးပိုင်းဒေသမှာ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ ရိန်းဒီးယား သမင်ရေခင်းထားတဲ့ အိပ်ရာနဲ့ သက်သောင့်သက်သာ ဇိမ်ရှိရှိ အိပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ရေခဲ ပန်းကန်၊ စားပွဲ
ရာသီဥတု ပူလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ရေခဲတွေဟာ အရည်ပျော်ကျ သွားတတ်တာကြောင့် နောက်တစ်နှစ် ရေခဲရာသီမှာ ဟိုတယ်ကို နှစ်စဉ် အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရပါတယ်.. ပြန်လည် တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်း ရေခဲဟိုတယ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းဟာ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် လုံးဝ မထပ်စေရအောင် တည်ဆောက်ကြပါတယ်.. ဟိုတယ်ရဲ့ အတွင်းအပြင် ပုံသဏ္ဍာန်ကို မထပ်စေရုံသာမက၊ ဟော်တွင်တွင်းရှိ ပရိဘောဂများကအစ ဒီဇိုင်းများ မတူအောင် ပြုလုပ်ထားပြီး ရောက်လာသော ဧည့်သည်များအတွက် တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မတူညီသော ခံစားမှုများ ပေးနိုင်အောင် အထူး ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ရေခဲပန်းပု ပညာရှင်များစွာထဲမှာမှ လက်ရွေးစင် ၅၀ဦးကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး ရေခဲဟိုတယ်ကို တည်ဆောက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်.. သို့ကြောင့်လည်း ဟိုတယ်တွင်းရှိ ထုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းပု လက်ရာများမှာ အံ့မခန်း ဆန်းကြယ် လှပနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရချင်သူများ ရေခဲဟိုတယ်ကို သွားရောက်လို့ ဟန်းနီးမွန်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်စေ၊ အားလပ်ရက်ဖြစ်စေ သွားရောက် နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
အောက်မှာတော့ ကမ္ဘာတလွှားမှာ ရှိတဲ့ ရေခဲဟိုတယ်များရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source from http://www.fungur.com/impressive-ice-hotel-quebec-city/